Nkọwapụta Dị Mkpa maka Lineun Samsun Sarp | RayHaber
HomeTurkeyBlack Sea Region52 ArmyNkọwapụta Dị Mkpa maka Lineun Samsun Sarp
24 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 52 Army, 55 Samsun, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, Black Sea Region, Isi akụkọ, Turkey
akụkọ pụrụ iche nke samsun maka usoro ụzọ ụgbọ oloko
Akuko Ordu University ‘Samsun-Sarp High Speed ​​Train Project’; "Ọ ga-eweta nnweta dị mkpa iji dozie nsogbu nsogbu akụ na ụba, karịsịa ọrụ, site na ụgbọ okporo ígwè na ụgbọ elu na-agba ọsọ ụgbọ elu na mpaghara".
Mahadum Ordu (ODU) Unye Dean of Faculty of Economics and Sniences, 'Samsun-Sarp High Speed ​​Train Project' akwadebewo akụkọ banyere ya. Ọrụ ngo nke Samsun-Sarp ga-eme ka azụmaahịa dị na mpaghara Oke Osimiri Ojii dị na nkwupụta ahụ kwuru na akụkọ ọdịnihu nke ógbè ndị a dọtara ndị njem nleta ka ukwuu. Akuko ahụ, Sarp'a ga-ebufe okporo ụzọ ya na obodo dịka Georgia na Azerbaijan ga-ewusi ọrụ azụmaahịa ike.
EGO NA-EKWU OKWU EGO
N'ime akụkọ ahụ, enwere mmekọrịta siri ike n'etiti ọkwa mmepe mpaghara na netwọ ụgbọ njem na mpaghara ahụ. Project, Central Black Sea si Black Sea n'ebe ọwụwa anyanwụ ejedebe na ugwu Turkey Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, dị ka Artvin ógbè ozugbo jikọọ ga-enwe ike ikpoputa hotara na mbụ fọdụrụ anāchi achi na ala nke ógbè dị ka anya dị ka nke a iga akara. A ananu hotara na mbụ anāchi achi na mpaghara a na ógbè bụ ihe kasị esịtidem Mbugharị na Turkey. Ihe kachasị mkpa kpatara nke a bụ enweghị ohere inweta ọrụ
RAILWAY kama HIGHWAY
Nkwupụta a gụnyere nkwupụta ndị a: Mpaghara a ga-enye onyinye dị ukwuu na mmezi nke nsogbu akụ na ụba, karịsịa ọrụ, site na ụgbọ okporo ígwè na ụgbọ elu. A ga-ebelata nrụgide akụ na ụba, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọdịbendị na gburugburu ebe obibi maka ógbè ndị ọzọ na-adọta ịkwaga maka mbugharị nke ga-ebilite n'ihi ohere ọrụ ọ ga-eme. Na nke a, ihe niile nke Turkey na okwu nke a ọzọ ezi mmepe obodo, ulo oru mbo ke nkesa, na okwu nke ndụ ohere na-elekọta mmadụ na ikpe ziri ezi ga-ike a ọzọ ezi mmadụ. Ikike nke ụzọ okporo ụzọ abụọ nke oge a na nke uzo okporo ụzọ 6. Oghere dị n'okporo ụzọ awara awara 6 bụ mita 37,5, ebe obosara obosara nke okporo ụzọ 2 bụ naanị mita 13,7. Ọ ga-aka baa uru karịa ịhọrọ ụzọ njem dị obosara ka mbara obosara dị, ma n'okwu ọnụ ala ma ịchụ ego na ụgwọ ụlọ. O di nkpa icho ma kwalite oru ngo nke NWT n'uzo zuru oke, na-eburu n'uche data, omuma na nchebara echiche ndi di mkpa. ”na Samsungazete)
Ndị NGO bụ ndị mmekọ maka Samsun Sarp Railway Line Hat
Okwu Samsun-Sarp malitere ịzụ ụgbọ okporo ígwè
Imekọ ihe maka Samsun-Sarp okporo ụzọ
Samsun-Sarp okporo ụzọ na-emeghe njem nleta
Ụgbọ okporo ígwè Samsun-Sarp ịzụlite Osimiri Ojii
Ụgbọ okporo ígwè Samsun-Sarp dị ezigbo mkpa
Gọvanọ Yavuz: "Samsun-Sarp Railway dị na Agenda nke State"
AKWUKWU NDỊ MMADỤ Aksoy Samsun-Sarp Railway
Bektasoglu nke CHP kwuru na Samsun-Sarp Railway TBM
Samsun-Sarp na-aga n'ihu